Fitokonana Tsy Fihinanan-kanina & Fifandonana ao Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2018 11:54 GMT
Akbar Ganji, mpanao gazety mpanohitra sady mpanoratra, no nanasa an'ireo Iraniana mba hanjohy azy nandritra ny fitokonana tsy fihinanan-kanina nandritra ny telo andro, ny 14 – 16 jolay, mba hisarihana ny sain'izao tontolo izao mikasika ireo voafonja ara-politika ao Iràna. Maro ireo blaogera nanohana ny heviny saingy ny sasantsasany kosa naneho ireo ahiahiny mikasika ny hetsika tahàka io.
Sibitala, blaogera monina ao Kanada, no milaza fa manohana ny hevitr'i Ganji izy mikasika ny telo andro tsy fihinanan-kanina (Persiàna). Avy ao amin'ny Anjerimanontolo Toronto, nanoratra mikasika io hetsika fanoherana io izy tao amin'ny blaoginy :
Tsy ireo raharaha iraniàna irery ihany akory no olana resahan'ireo iraniana blaogera. Ireo vaovao iraisam-pirenena mafàna sahala amin'ny fifandonana tao Gaza dia niteraka ireo fanehoankevitra mahaliana teny anivon'ireo iraniana blaogera.
Diso fanantenana tamin'ny fihetsik'ireo firenena tandrefana mikasika ny fifandonana tao Gaza (Persiana) i Mohammad Ali Abtahi, politisiana reformista sady blaogera. Nisarika ireo mponina rehetra ny Tandrefana mba hisafidy ny demokrasia sy ny soatoaviny amin'ny lafiny iray, saingy amin'ny lafiny ilany, mitohy tsy manameloka ireo fihetsik'i Isiraely manohitra ireo Minisitra Hamas sy ireo solombavambahoaka voafidy ara-demokratika ao amin'ny Parlemanta, ireo firenena tandrefana. Ampian'ilay blaogera hoe: